प्रचण्ड आलीसान महलमा पुगे तर जनयुद्धका कमाण्डर भेडा पाल्दैछन् !
» प्रचण्ड आलीसान महलमा पुगे तर जनयुद्धका कमाण्डर भेडा पाल्दैछन् !
बझाङ - बुङगल नगरपालिका २ का शंकर धामी गरेरै राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् । शंकर मात्र होईन, गाउँकै किशोर धामी र कमल धामी पनि यो ब्यवसायमा सक्रिय छन् । हिमाली क्षेत्रमा भारी बोक्न, उन र मासुका लागि भेडाबाख्राको प्रयोग हुन्छ ।
हिउँदेयाममा बेसी र बर्षायाम्मा लेकतिर लाग्नु उनीहरुको दैनिकी नै हो । ०५९ सालमाकक्ष ७ मा पढ्दै गर्दा तत्कालिन नेकपा माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा लागेका उनहीहरु अहिले भेडापालान गरेर बार्षिक ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्, यो खबर आजको कारोवार डेलीमा छ ।